ဒုတိယကျော့…… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒုတိယကျော့……
Posted by ည lay on May 21, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ဘယ်လိုတွေများရိုက်ပြီး ဒီလောက်တောင်လှပကြည်လင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေရတာလဲ ညလေး
ရယ် အားကျလိုက်တာ။ အရမ်းလှတဲ့ ပုံလေးတွေမို့ ၂ ခေါက်တောင်ဝင်ကြည့်မိတယ်။ အောက်ဆုံး
ကနှင်းဆီပန်းလေး ယူသွားတယ်နော်.။ ကျေးကျေးပါ…ညလေးရေ။
ဆရာမကြီး TTNU ကထည့်ဘို့ အကြံပေးတဲ့အတိုင်းထည့်လိုက်တာ ညွန်းတဲ့သူအတွက်အဆင်ပြေသွားရော။
စာထဲ့ချင်ရင်ဓါတ်ပုံတင်တဲ့နေရာက caption ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့စာထည့်ရင် ဓါတ်ပုံအောက်မှာ
ကျန်ာကို တော့ မဝေေ၀ ကသင်ပေးတာပါဗျို့
အင်နော် ညလေးရေ. အပေါ်ဆုံက ဒန့် ဆင်းလေဒီပန်းလေးတွေ
လှတယ်နော် အဲပန်းတွေက ဆံထုံးမှာ ပန်ရင်ပိုလှသဗျ..
အုံပေါင်း (၅၀)ကျော်ဆိုတော့ ရောင်းစားတာလား ၊ စီပွားဖြစ် လားဗျ ..
ညလေးနဲ့လေ …အောက်ဒိုးဂလေး ဘာဂလေး
ဂယ် ဂယ် ဂယ်ပါ…
ညလေး ဆိုတာနဲ့ ကိုဂီပြောတာလေး တစ်ခုသွားသတိရတယ် ..
ကိုဂီရေ မှတ်မိသေးလား ??? ကိုလုလင် ကိုဒါ့ပုံ ကိစ္စမေးတုန်းကလေ -ု-ေ-း ဆိုပြီး ပြောပြမှာ မြင်ယောင်သေး ..
mandalaygazettemembers@im.partych.at ကို G talk မှာ Add လိုက်ပါနော် ..
ပညာရပ်တွေလည်း သင်ယူ ချင်လို့ပါ ..
ဖားသက်ပြင်း နဲ့ ကိုကိုကြောင်ဟာ စစ်မှန်တဲ့ တရုတ် မ ကြိုက်သူ တွေပါဗျာ….
ကနေတဲ့ မိန်းခလေးတွေ လှလိုက်တာနော်…
အဟုတ်.. ပြီးမဲ့သဘော။ ။
ညရေး ရုပ်ဒါနဲ့ဒဂျီးဒေါင် ထပြီး ကပြေးဒေါ့မယ်ဒဲ့ဂျ
အလဲ့ သဂျီးက ကဗျာဆိုနေပါ့လား ..
အဟမ်း … ညလေးရေ အားပေးသွားပါတယ်နော်
ကင်မရာဒေတာတွေမပါတော့ ဘယ်လို ညွှန်းရမယ်မှန်း မသိဘူး..။
ကင်မရာဒေတာတွေရယ် ရိုက်တဲ့အချိန်ရယ် …အလင်းရောင်အနေအထား (မိုးအုံ၊နေပူ၊အရိပ်ထဲ လွင်ပြင် စသည်ဖြင့်) ပါရင် ပိုမှတ်ချက်ပေးလို့ ကောင်းမလားပဲ …။
ဒန်းစီးလေဒီနဲ့ သစ်ခွပုံ ကြိုက်တယ် ..
အောက်ကပုံတွေမှာ အားနည်းချက်ရှိနေတယ် ..
ပထမတစ်ချက်က အရောင်ကွဲပြားမှု (Contrast) မရှိတာ …
အ၀ါရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင် Mid Tone တွေပဲ များနေပါတယ်။ Shadow နဲ့ Hight light များ မကွဲပြားပါ ။
နောက်တစ်ချက်က Subject ပျောက်နေတာပါ …။ ဘာကိုဦးစားပေးပြချင်တယ်ဆိုတဲ့ တာ့ကက် ပျောက်နေလို့ ပုံက ထင်းထွက်မလာပါ …။လူ့မျက်စိအကြည့်က ကိုယ်ပြချင်တဲ့ Subject ပေါ် တန်းရောက်အောင် အရောင်နဲ့သော်လည်းကောင်း … အထားအသိုနှင့်သော်လည်းကောင်း …. Focus နဲ့သော်လည်းကောင်း ပြသင့်ပါတယ်..။
နောက်ဆုံးအားနည်းချက်က Focus မပြတ်တာပါ ..။ လက်လှုတ်လို့လား .. ဖိုးကပ်သေချာ မမိတာလား ..မသေချာပါ…။ ကျွန်တော့်အထင် ကင်မရာသမားတစ်ယောက်က အနည်းဆုံး ၁/၃၀ ရှပ်တာစပိလောက်အထိ လက်ညိမ်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် …။
နှင်းဆီပန်းပုံလေး လှချင်ရဲ့သားနဲ့ ဖိုးကပ်ကြောင့် ညံ့သွားတာပါ ….။ ဆူးလေးတွေ ဒီတေးပေါ်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ ။
ကျွန်တော်ပြောတာ မပြည့်စုံလောက်သေးပါဘူး… ။ ကိုစိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ ပိုစ့်တွေနဲ့ မောင်ဂီရဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ဖို့ညွှန်းပါရစေ …။ ကျန်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကောင်းများလဲ ရွာထဲမှာ အများကြီးရှိပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုလဲ တစ်ပုံခြင်း စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် …။
အပြုသဘောနဲ့ ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်နော …။
လှတယ် ညလေးရေ .. ပန်းတွေ ကြည့်ရတာ … လန်းဆန်းသလို ချည်းခံစားရတယ် များများတင်ပါဗျို့ … ။
ကိုဂီ တို.ကပြော၇င်းဆို၇င်း ဘယ်က တ၇ုတ်မ အကြောင်း …ကျောနေထာ၇ဲမသိ?
…ဆ၇ာထက်ဝေ ၇ဲ.“အင်တာနက်ဇတ်လမ်း 1,9 ဖတ်မိကတည်းက..ဂျီတောက်ကိုအပြတ်ဖျတ်လိုက်ပါဂျောင်း.